Expert Guests - FXPRIMUS
FXPRIMUS waa mid si dhaw kuugu xidhaysa Khabiiro ku xeeldheer Finance iyo Forex.
Wixii fikrad ah, warar, cilmi baaris ah, falanqayn, qiimayaasha ama macluumaad kale ee ay heshay FXPRIMUS waa kuwa bixiya faallooyinka guud ee suuqa kamana qayb noqdaan talo maalgashi. FXPRIMUS ma aqbasho mas’uuliyadda wixii khasaare ah ama waxyeelo ah, oo ay kujirto iyadoon la xadidin, khasaare kasta oo faa’ido leh, oo si toos ah ama si aan toos ahayn uga imaan kara adeegsiga ama ku tiirsanaanta macluumaadkaas.
“Peter Petrou wuxuu leeyahay waayo-aragnimo 15 sano ka badan oo ah bangiyada iyo suuqyada maaliyadeed. Wuxuu ka ganacsadaa suuqyada stock indices, commodities, iyo bonds isagoo si gaar ah diiradda u saara ganacsiga iskubadalka lacagaha qalaad ee G10 . Mr Petrou wuxuu ku dhashay waxna ka bartay London isagoo qaatay shahaadada heerka koowaad, shahaadada heerka labaad in maalgashiga (Finance) oo uu ka qaatay jaamacadda London (Birkbeck) iyo markii dambe Wakiilka Amniga iyo Maalgashiga Maaliyadeed ee Chartered Institute for Security and Investment. (CISI)”